Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Italiantali Mario Balotelli nwa akwukwo akuko nke oma
LB na-egosi Full Story of a Football Football with the nickname “Super Mario”. Anyị Mario Balotelli Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a gụnyere oge ndụ ya, nzụlite ezinụlọ, ndụ onwe onye, ​​eziokwu ezinụlọ, ụdị ndụ ya na obere ihe ndị ọzọ amaara ama gbasara ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ememme mgbaru ọsọ ya pụrụ iche. Agbanyeghị naanị ole na ole na-atụle akụkọ ndụ Mario Balotelli bụ nke na-atọ ụtọ. Ugbu a na-ebuteghị ọzọ, ka anyị bido.
Mario Balotelli nwa akwụkwọ n'akwukwo ihe ọmụma - eziokwu Mmalite Ndụ na Ezinụlọ
Malite na, Mario Balotelli Barwuah a mụrụ na 12th nke August 1990 na Palermo dị na Ịtali. Ọ bụ 2nd ụmụ 4 mụrụ site na njikọ dị n'etiti nne nne ya, Rose na nna ya. Thomas Barwuah.
Zute Mario Balotelli ndị nne na nna. Thomas na Rose.
A chọpụtara na agbụrụ ndị Ịtali nke agbụrụ Black nke nwere mgbọrọgwụ Ghan nwere ọgwụ mgbagwoju anya mgbe ha mụsịrị nwa, ọnọdụ nke ndị nne na nna ya na - enweghị ike na - enwe ike ịgwọ ma hapụrụ ya n'enweghị nhọrọ karịa ịnye ya maka nkwado mgbe ọ bụ agadi 3.
N'ihi nke a, ndị nne na nna toro eto bụ Silvia na Francesco Balotelli zụlitere Young Balotelli kemgbe ọ dị afọ 3. Na-etolite na Balotelli nke nwere ụmụ nwoke abụọ na nwa nwanyị nke aka ha, e kwere ka Balotelli na-eleta nne na nna ya mgbe niile. ngwụsị izu.
Nwa okorobịa Balotelli na nleta nne na ụmụnne ya.
Balotelli jiri oge dị otú a na-akpakọrịta na ụmụnne ya bụ Abigail, Enoch na Angel Barwuah ruo afọ ole na ole tupu Balotellis na-elekọta ya ruo mgbe ebighị ebi n'ihi enweghị ike nke ndị nne na nna ya nwere ike iji gboo mkpa ahụike ya na mkpa ya.
Mario Balotelli nwa akwụkwọ n'akwukwo ihe ọmụma - eziokwu Ịrụ Ụlọ Ọrụ na Ndụ Ndụ Mbụ
Balotelli họọrọ football dị ka egwuregwu nwata ma na-etinye aka na egwuregwu ahụ n'agbanyeghị agbanyeghị nsogbu ahụike nwata ya. Ka ọ na-erule oge ịgba egwu bọọlụ bụ agadi 11, ọ sonyeere sistemụ ntorobịa nke 'AC Lumezzane' ebe mmalite nke asọmpi ọrụ asọmpi ya na egwuregwu ahụ malitere.
Ọ bụ na 'AC Lumezzane' na Balotelli bilitere n'ọkwá ma bulie ya na ndị isi klọb mgbe ọ bụ naanị 15. Mgbe ọ gachara ọrụ oge mbụ, Balotelli nwere ihe ịga nke ọma na Barcelona tupu ya abanye na Inter Milan na mbinye ego na 2006 .
Balotelli dị afọ 15 dekọtara nwa akwụkwọ na Barcelona tupu ya abanye na Inter Milan.
Mario Balotelli nwa akwụkwọ n'akwukwo ihe ọmụma - eziokwu Ụzọ E Si Mara Aha
Balotelli nwere oge na-akpali mmasị na Inter Milan na-agụnye inyere ọgbakọ aka mmeri Supercoppa Italiana na 2008 na 2007-2008 Serie A. Tụkwasị na nke ahụ, mgbe ahụ, 18 dị afọ na-aghọ onye nke kachasị nta na ọkpụkpọ ọ bụla iji merie egwuregwu egwuregwu Champions League. oge.
Otú ọ dị, o chere nsogbu ndị a na-apụghị imeri emeri ihu na-adabere na abụ ndị na-akpa ókè agbụrụ megide ya yana enweghị ike ịbụ onye ọkpụkpọ na-enye ọzụzụ. N'oge na-adịghị anya, Balotelli malitere ịme ihe omume na-ewe iwe ma kpasuo ndị Inter Milan iwe site na ịpụta na TV nke ,tali, na-eyi uwe elu nke ndị asọmpi klọb ahụ, AC Milan.
Mario Balotelli nwa akwụkwọ n'akwukwo ihe ọmụma - eziokwu Na-ewu Onwe Gị Akụkọ
Mbubreyo 2010 bụ oge nke mepere isi ọhụrụ na ndụ Balotelli ka onye ọkpụkpọ ahụ bịanyere aka na Manchester City. O nyere goolu na mbụ ya na bekee jiri ọkpụ atọ asatara ise merie Arsenal.
Ebe a kwadoro na-aga n'ihu na-eme onwe ya ka ọ bụrụ ọkacha mmasị na egwuregwu ndị ọzọ ma na njedebe nke afọ, merie akara Golden Boy maka arụmọrụ ya dị ịrịba ama. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Mario Balotelli na ihe ịga nke ọma na Manchester City mere ka ọ bụrụ onye a ma ama n'etiti ndị egwuregwu bọọlụ n'ụwa niile.
Mario Balotelli nwa akwụkwọ n'akwukwo ihe ọmụma - eziokwu Ezigbo Ndụ Mmekọrịta
Mario Balotelli ka ga-alụ di ka oge edere. Anyị na-ewetara gị nkọwa gbasara akụkọ nwoke na nwanyị na-emekọ ihe na mmekọrịta ndụ dị ugbu a. Malite na football star nwere ọtụtụ mmekọrịta na ndị inyom site na ụdị na-eme ihe nkiri na ndị nke àgwà ọma.
N'ime ụmụ nwanyị ọ bụla adịghị eguzo dị ka enyi nwanyị ya tụgharịrị nwa mamma, Raffaella Fico. Oge duo nke dị n'etiti 2010-2013 na n'ime oge ahụ nwere nwa nwanyị a na-akpọ Pia (nke a mụrụ na 5th December 2012).
Mario Balotelli na enyi nwanyị mbụ Raffaella Fico na nwa nwanyị Pia.
Otú ọ dị, o were afọ abụọ tupu ihe ọma nke nyocha DNA mere ka Balotelli kwetara na nwa ya nwanyị mụrụ ya. Ebe kachasị mma nke ọhụụ na-aga n'ihu bụ njikọ ya na enyi nwanyị Belgium, Fanny Neguesha na 2013. Ha weputara iche na 2014.
Stephan El Shaarawy Ụmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu na-enweghị isi
Mario Balotelli na enyi nwanyị mbụ Fanny Neguesha.
Balotelli nọ n'oge ederede inwe mmekọrịta ya na nwa agbọghọ nwanyị Switzerland ya bụ Clelia bụ onye mụụrụ ya nwa ọdụm mbụ ya (a mụrụ September 2017).
Mario Balotelli na enyi nwanyị Clelia na nwa ọdụm.
Mario Balotelli nwa akwụkwọ n'akwukwo ihe ọmụma - eziokwu Ezi Ezinụlọ
Balotelli na-esi n'aka ndị na-adịghị mma n'ezinụlọ. Anyị na-ewetara gị nkọwa zuru oke gbasara nne na nna ya, nne na nna na ụmụnne ya.
Banyere Mario Balotelli Biological Father: Thomas Barwuah bụ nna nke Balotelli. Ọ bụ onye Ghan nke kwagara na Italy afọ ole na ole tupu a mụọ Balotelli. A na-ekwu Thomas maka mgba mgba iji nweta ego maka ụgwọ ahụike nke Balotelli tupu enyefee ya maka nkuchi. Agbanyeghị Balotelli kwenyere na ndị mụrụ ya gbahapụrụ ya, n'ihi ya, ya na ndị ezinụlọ ya enweghị mmekọrịta.
Banyere Mario Balotelli Nne Nne: Rose Barwuah bụ nne Balotelli. Ọ bụ onye na-elekọta ụlọ n'oge Balotelli mụrụ ma gaa n'ihu na-arụ ọrụ dị ka onye dị ọcha ọtụtụ afọ mgbe e mesịrị. Rose lekwasịrị anya n'iso Balotelli nwee mmekọrịta nke ọ kwenyere na nne na nna nne na nna zụlitere ya na ndị ikwu ya.
Banyere Mario Balotelli Foster Nna: Francesco Balotelli bụ onye na-azụlite nna nke football ọgụgụ. Ọ bụ ọgaranya bara ọgaranya na Italian nke ji akụ na ụba ya na ịkwado Balotelli n'ụzọ dị ukwuu. Francesco biri ogologo oge iji hụ Balotelli nweta nnukwu ihe dị na bọlbụ tupu ya agafe na July 2015 mgbe ọrịa ahụ dị ogologo.
Banyere Mario Balotelli Foster Nne: Silvia Balotelli bụ nne na-azụ ụmụ nke ụmụ amaala. Ọ bụ onye agbụrụ ndị Juu na otu n'ime ndị kacha nso Balotelli. Nke a bụ njikọ ha na nghọta nke onwe ha nke ukwuu na Balotelli raara onwe ya nye ya nnukwu ihe mgbaru ọsọ abụọ o meriri maka France megide duringtali n'oge semifinal nke Euro 2012 ya.
Mario Balotelli ya na ndị nne na nna azụtara.
Banyere Mario Balotelli ụmụnne ya: Balotelli nwere ụmụnne atọ ndị ọ tolitere ileta na Brescia, Ịtali. Ha gụnyere nwanne ya nwanyị tọrọ ya bụ Abigail, nwanne ya nwoke nke nta bụ Enoch na nwanne ya nwanyị bụ Angel.
Abigail Barwuah bụ n'oge edekọ akwụkwọ na nwunye na ụmụaka na ndị OBfefe Mart Martins Enoch Barwuah bụ onye n’egwuregwu bọọlụ n’egwuregwu fortali, FC Pavia. Ka ọ dị ugbu a, amachaghị banyere nwanne nwanne Balotelli Angel Baruah, ọ bụghị Balotelli ka a kọwara na ụmụnne ya na-azụlite.
Foto nke ezinụlọ Mario Balotelli na-egosi ụmụnne ya.
Banyere Mario Balotelli Ndị ikwu: Agaghị agọnahụ eziokwu ahụ bụ na Balotelli nwere ụmụnne nna ya, nwanne nna ya, ụmụ nwanne nne ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya n'agbanyeghị na ọ naghị amata ha. N'otu aka ahụ, amachaghị banyere nne na nna ya ochie.
Mario Balotelli nwa akwụkwọ n'akwukwo ihe ọmụma - eziokwu Ezigbo Ndụ Onye
Gịnị na - eme Mario Balotelli akọrọ? nọdụ ala ka anyị na-ewetara gị ụdị àgwà ya iji nyere gị aka ịchọta ya n'ụzọ zuru ezu. Iji malite, Mario Balotelli n'onwe ya bụ ngwakọta nke àgwà Zodiac. Ọ bụ onye na-adọrọ mmasị bụ onye siri ike na nchekwube.
Àgwà Balotelli dị ka mmadụ dị iche karịa nghọta ọha na eze na ọ na-eju anya maka omume dị ala, eziokwu nke ndị nọ ya nso nwere ike ịgba akaebe. Ihe omume ntụrụndụ ya gụnyere igwu egwuregwu vidio, na-ege egwu, na-ekiri ihe nkiri dị mma na ndị enyi na-ezute.
Mario Balotelli nwa akwụkwọ n'akwukwo ihe ọmụma - eziokwu Eziokwu Nzuzo
Mario Balotelli bara uru ka na-enyocha ya. Agbanyeghị, ọ nwere uru ahịa nke £ 18.00m dị ka n'oge ederede. The "Super Mario" bụ onye na-azụ ahịa anụ ọhịa nke na-echeghị na a ga-akwụ ya ụgwọ maka ihe ọjọọ ọ na-eme ma na-ahụkwa ya n'ụgbọ egwuregwu na ọmarịcha ụgbọ ala gụnyere Ferrari, Bentley, Audi, na Maserati.
Ọ nọ na-arụ ọrụ ya ịgbazite ụlọ ruru nde dollar mgbe ọ na-egwu egwuregwu dị iche iche. Bazọ Balotelli si kọwaa ya, ndụ bara uru ibi ndụ n'ụzọ zuru oke nke ikike mmadụ. N'ihi ya, ọ na-enwe mmasị ịga nnọkọ oriri, iso ndị enyi na-a drinkingụ mmanya, ị smokingụ sịga ma ghara ịhapụ ohere iji nwee ọ toụ ọ bụrụgodi na ọ gụnyere ịkwụ ụgwọ.
Mario Balotelli nwa akwụkwọ n'akwukwo ihe ọmụma - eziokwu Eziokwu efu
Balotelli gosipụtara ọrụ ebere nke na-adịghị ahụkebe site na ịnye onye na-enweghị ebe obibi $ 1,000 mgbe ọ merie $ 25,000 na cha cha.
Banyere okpukpe ya, a mụrụ Mario Balotelli nye ndị nne na nna bụ Ndị Kraịst ma zụlitere ndị nne na nna na-azụlite ndị Juu. Ọ na-egosi ekele maka Iso Ụzọ Kraịst karịsịa nke ndị Katọlik site na iji roarya. Ke adianade do, enye ama okosobode ibuot Catholic Church Pope Francis.
Mgbe ụfọdụ, na October 2011, Balotelli ji ọkụ gbaa ụlọ ime ụlọ ya ọkụ mgbe ọ gbasịrị ọkụ na windo ya. Mgbe ihe a mechara, Balotelli ji obi ụtọ ghọọ onye na - ekwuchitere nchekwa ọkụ maka obodo Manchester.
Ihe ka ọtụtụ n'ime tattoos ya dị ka n'oge ederede. Onye a ma ama na nke na-adịbeghị anya bụ Genbeis Khan na-ede egbugbu n'obi ya. Ọ na-agụ, sị: 'Abụ m ntaramahụhụ nke Chineke. Ọ bụrụ na ị meghị mmehie dị ukwuu, Chineke agaghị ezitere gị ntaramahụhụ dị ka m n'ahụ gị. '
N'ozuzu ya, Mario Balotelli bụ ihe na-akpali mmasị na ma gbanyụọ egwu nke egwuregwu ahụ. Anyị na-ewetara gị vidiyo na-atọ ụtọ nke na-achịkọta ụfọdụ antics ndị na-atọ ọchị nke amamịghe egwuregwu bọọlụ dị ịtụnanya wetara. Ebe E Si Nweta WeTalkFootball.
Mario Balotelli nwa akwukwo n'akwukwo ihe omuma ihe omuma- Video Nchịkọta
Biko chọta n'okpuru, nchịkọta vidiyo YouTube anyị maka Bio a. Jiri obi oma gaa ma denye aha anyi Youtube ọwa maka vidiyo ndị ọzọ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Mario Balotelli nwa akwukwo akụkọ tinyere akwụkwọ akụkọ efu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kekọrịta anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.